ကျောက်မရှာ ကျောက်မလုပ်ပဲ သိန်း ၂၀၀၀ ကျော်အောင်ခဲ့သူ ဦးကံမောင်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကျွန်းလှမြို့လေးမှာ နေထိုင်သော မိသားစု ၃ယောက်ရှိပါတယ်။ ထိုမိသားစု အိမ်ထောင်ဦးစီး ဦးကံမောင်နဲ့ သူ၏ဇနီး ဒေါ်ဖွေးအောင် တို့၏သား မောင်နေလင်းအောင် သူတို့မိသားစုလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်းလှမြို့ဟောင်းက *သဖန်းဆိပ်*ဆည်တည်ဆောက်သောအခါ…
ကျွန်တော်နှင့် ဖားကန့်အမှောင်နယ်မြေများ အပိုင်း (၉)
ဟောင်ပါးရွာခံ လောပန်းရှမ်းလင်မယားတွေဆီမှာ အလုပ် လုပ်တာ တစ်ကျင်းပြီးပါပြီ ငွေလဲ အနည်းငယ်သာရပါတယ် ။ရှမ်းစုစား လိမ်လည်မူများကြောင့် ရသသင့်သလောက်မရ မလိုအပ်သော ကုန်ကြငွေတွေကို ထည့်၍တွက်ယူခြင်းကြောင့် ငွေကရသင့်သလောက်မရပါ။ ကျောက်စိမ်းကို…
တကယ်တော့ ကျောက်တူးသမားများဟာ လောပန်းနွားတွေပါ
၁၉၉၇ လောက်က ဖားကန့်မှာ ကျောက်တူးရင်း ကြားခဲ့ဖူးတဲ့စကားပုံလေးတွေသတိရတယ် ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း တစ်သောင်း ဘယ်လောက်စိမ်းစိမ်း တစ်သိန်း တကယ်တော့ ကျောက်တူးသမားများဟာ လောပန်းနွားတွေပါ ဘလာ ဘလာပေါ့ အဲဒီထဲကမှ…
ရှရောင်ခမှော် ဖားကန့် ဖားကန့်လွမ်းချင်း 1997 1999 အပိုင်း(၂) ကျင်းသားအလိုရှိသည် မှတ်ပုံတင်ပါရမည်.(ချင်းလူမျိုးမပါ) ဘာလို့အဲလိုထည့်ရေးတာလဲမေးတော့ ရှင်းပြရ ပြောရဆိုရတာ လက်ပေါက်ကပ်လွန်းလို့တဲ့ ထမင်းအဝစား ၂၀၀ (ရခိုင်မပါ)…
“ဟာ”ကျောက်ကွ ဟေ့လူတွေ ထကြည့်ကြဦး”
ဖားကန့်လွမ်းချင်း(1997_1999) “ဟာ”ကျောက်ကွ ဟေ့လူတွေ ထကြည့်ကြဦး” အနာတွေဗလပွနဲ့ လက်၂လုံးလောက်မရှိတရှိ အရည်ကြိုးအထင်းသားပေါ်နေတဲ့ ကြက်သွေးကြော (ခေါ်) ဖယောင်းကြော ကျောက်စိမ်းကြိုးပတ်တစ်လုံး အလေးချိန်၅ပေါင်လောက် လေးထောင့်ပုံမကျတကျ ကျောဘက်အရည်ကြိုးကထင်းပြီး ထိပ်မှာ…
ကျောက်ဆိုတာ ထိုက်မှရတာ(သို့မဟုတ်)တလောမုန်းရဲ့ကျောက်စိမ်းဂိုဒေါင်နဲ့ ဂိုဒေါင်ဖောက်သူ ရွှေသီး
လောမုန်းဆိုတာ သိသူတွေလည်း သိကြမယ်။ကျောက်ဆိုတာ ထိုက်မှ ရတာဆို တကယ်ဗျ။ 144 ထုတ်ထားရတဲ့ အဲ့ငုတ်ကျင်းရဲ့ မူလပိုင်ရှင်က ဖားကန့် က စိမ်းရွှေဝါ အပ်စိုက်ရဲ့ ငုတ်ကျင်း…
‘ အကို ! ကျောက်စိမ်းတွေ ရောင်းစရာရှိလို့ ပွဲတိုက်ပေးပါဦး ‘ ‘ အိုကေ ! ပြပါဦးကွ မင်းကျောက်စိမ်းတွေ ‘ ထုတ်ပြလာတဲ့ လွှာချပ်သုံးပြား။…
ကားဘီးခုတဲ့ ဂမျြးတုံးဂဲကနေ ကြောကျအောငျသှားတဲ့ ကားဆရာ
လှနျခဲ့သော ၁၄ နှဈခနျ့က မန်တလေးမွို့ စခြေိုအနီးမှာ နထေိုငျ၍ ကားမောငျးခွငျးဖွငျ့ လုပျကိုငျသော လူငယျ တဈယောကျရှိပါတယျ။ ထိုလူငယျလေးရဲ့ မိဘမြားကမန်တလေးမွို့ဇာတိခံတှပေါ၊ မိဘမြားရဲ့ စီးပှားရေးက မန်တလေးစြေးခြိုထဲမှာ…
ကျောက်မျက်ရတနာများကို အရောင်ပြောင်းခြင်း (TREATMEMT OF STONE)
ကျောက်မျက်ရတနာများကို အရောင်ပြောင်းခြင်း (TREATMEMT OF STONE) ကျောက်မျက်ရတနာများကို ပိုမိုတောက်ပြောင်လှပလာစေပြီး ဈေကွက် ကောင်းကောင်းရရန်အတွက်ယခုအခါ ခေတ်မီနည်းများဖြင့် အရောင်ပြောင်းသော အလုပ်ကို နိုင်ငံများစွာက လုပ်နေကြသည်။ထို့ကြောင့်ကျောက်မျက်ရတနာများကို ဆေးဆိုး၍…
ကျောက်သမားတစ်ယောက်ဟာကျောက်ကိုနားလည်တတ်ကြွမ်းအောင်လေ့လာသင်ပြီးကျောက်ကိုအပိုင်ဖြတ်တယ် ကျောက်မြင်တိုင်းလုပ်ချက်ကိုဦးစားပေးတယ်။ကျောက်ကိုဘာကျောက်လဲအသားအဆင့်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာထက် ဘာလုက်ချက်ရှိလဲဘယ်လောက်ကျန်နိုင်လဲကိုဘဲစဉ်းစားတယ် လုပ်ချက်ကလေးနဲ့ဘဲဝယ်ရောင်း၊ဖြန်တောက်တယ်။တစ်ကွက်ကောင်းမြင်ရင်အပိုင်ဖြတ်ချတယ်၊ကျောက်ကုန်သည်… သူကျတော့ကျောက်သမားလိုဘဲကျောက်ပညာကိုကြွမ်းကြွမ်းကျင်ကျင်တတ်မြောက်တယ်။နားလည်တယ်။သူကြတော့ကျောက်သမားလိုဘဲလုပ်ချက်ကိုဦးစားပေးလုပ်တာပါဘဲ။ဒါပေမယ့်ကျောက်ကုန်သည်ကကျောက်ကိုဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူး၊သူကကျောက်ကိုလှအောင်ပြင်ပြီးတော့ဘဲပြန်ရောင်းတယ်။ ပုံမှန်အမြတ်ကိုဘဲအလေးထားတယ်။သူတိုနှစ်ဦးဟာ အတူတူဘဲ အားလုံးလုပ်ပုံလုပ်နည်းတူပါတယ်၊မတူတာကကျောက်သမားကကျောက်ဖြတ်တယ်၊ကျောက်ကုန်သည်ကကျောက်မဖြတ်ဘူး။ ကျောက်သမားကရတဲ့ကျောက်တိုင်းကိုဖြတ်ကွက်ကိုဘဲအလေးထားတယ်၊အပိုင်တစ်ကွက်ကောင်းဘဲစောင့်တယ်၊ကျောက်ကုန်သည်ကရတဲ့ကျောက်တိုင်းကိုဆေးချက်ဘဲကြည့်တယ်၊ဖြတ်ကွက်မကြည့်ဘူး၊လှအောင်ဘဲအမြဲဆေးပြီးရောင်းစားတာမို့သူအကြည့်ကဘယ်လိုပြင်ပြီးရောင်းရင်မြတ်မလဲဘဲအမြဲစဉ်းစားတယ်၊ကျောက်မှာကံတစ်ခုအပေါ်မှာလုပ်စားရတာမို့ ကျောက်ကုန်သည်ကကြီးပွားသွားတာများတယ် ကျောက်သမားကမကြီးပွားဘူး၊ကြီးပွားတဲ့သူတွေလဲရှိပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ကျောက်ကုန်သည်လိုလက်ညိုးထိုးပြလို့မရဘူး အကောင်းဆုံးလမ်းက ကျောက်ကုန်သည်အလုပ်ကိုအမြဲလုပ်ရင်းတခါတခါမှကျောက်သမားလုပ်ပါ ကိုယ့်ရဲ့ကြွမ်းကျင်မှုအပေါ်တွက်စပြီးကျောက်ကုန်သည်လုပ်ရင်းတခါတခါအပိုင်တွက်မြီးမှကျောက်ကိုဖြတ်ပါ။မပိုင်ရင်မသေချာရင်ကျောက်ကုန်သည်လုပ်ပါ၊သေချာပြီအပိုင်တွက်နိုင်ပြီဆိုကျောက်သမားလုပ်ပါ အများဆုံးကျောက်ကုန်သည်လုပ်ပါ….အနည်းဆုံးကျောက်သမားလုပ်ပါလို့ပြောကြားရင်း…